Masiixiyiinta, Kaniisada Dunida ee Switzerland (WKG)
Masiixiyiintu waa qof walba oo aaminaada Masiixa. Cusboonaysiinta Ruuxa Quduuska ah, Masiixiyiintu dib ayey u dhasheen oo, nimcada Ilaah iyadoo la raacayo korsashada, waxaa la geliyaa xiriir saxda ah oo lala yeesho Ilaah iyo dadka kale ee aadanaha ah. Nolosha Masiixiyiinta waxaa lagu gartaa midhaha Ruuxa Quduuska ah. (Rooma 10,9-13; Galatiya 2,20; Yooxanaa 3,5-7-8,34; Mark 1,12; Yooxanaa 13-3,16; 17-5,1; Rooma 8,9; 13,35; Yooxanaa 5,22, 23; Galatiya)
Waa maxay macnaheedu inuu noqdo ilmo Ilaah?
Xerta Ciise mararka qaar wey gacan sarreyn kareen. Mar bay weydiiyeen Ciise: "Yaad u malaynaysaa inuu ugu weyn yahay boqortooyada jannada?" (Matayos 18,1). Si kale haddii loo dhigo: waa maxay sifooyinka shaqsiyadeed ee Ilaah doonayo inuu ku dhex arko dadkiisa, tusaalooyinkee ayuu u arkaa kuwa ugu fiican?
Su’aal wanaagsan. Ciise wuxuu u qaatay inuu cadeeyo qodob muhiim ah: "hadaadan toobad keenin oo aad noqotid sida caruurta oo kale, boqortooyada jannada ma geli doontid" (V. 3).
Xertii waa inay yaabeen, hadaan la jahwareerin. Waxaa laga yaabaa inay u maleeyeen qof sidii Eliiyaah oo samada samada ka soo shiday inuu cadaawayaasha qaar ka cuno, ama jilaaf la mid ah Pinhas oo dilay dadka ku xadgudbay sharciga Muuse. (Bilowgii 4: 25,7-8). Miyaanay ahayn kuwa ugu weyn taariikhda dadka Ilaah?
Laakiin fikradeeda cabirku wuxuu diiradda saaray qiimayaasha khaldan. Ciise wuxuu iyaga tusay in Eebbe uusan dooneyn inuu dadkiisa tuso ama muujiyo falal geesinimo leh, laakiin astaamaha u badan tahay in laga helo carruurta. Waa hubaal in haddii aadan noqon sida carruurta yaryar, oo aadan weligaa geli doonin boqortooyada!
Sidee ayaynu u noqon karnaa carruurta? Ma inaan qaan gaarin, carruurnimo, jaahil nahay? Maya, waa inaan uga tagno dariiqyada carruurnimada waqti dheer kahor (1 Korintos 13,11). Waa inaan ka saarnay qaar ka mid ah astaamaha cunugga, halka aan haynno kuwa kale.
Mid ka mid ah tayada aan u baahanahay waa is-hoosaysiinta, sida Ciise ku sheegay Matayos 18: 4: "Ku alla kii is-hoosaysiiya sida ilmahan oo kale ayaa ugu weyn boqortooyada jannada." Marka loo eego fikirka Eebbe, qofka is-hoosaysiiya ayaa ah kan ugu weyn - tusaaladiisu waa tan ugu wanaagsan Eebbe hortiisa oo uu doonayo inuu dadkiisa ku arko.
Sababta wanaagsan; maxaa yeelay is-hoosaysiinta waa tayada Ilaah. Ilaah wuxuu diyaar u yahay inuu ka tanaasulo xuquuqdiisa badbaadada. Waxa Ciise qabtay markii uu jidh noqday ma aha dabeecadda dabeecadda Eebbe, laakiin waa muujinta jiritaanka Eebbe ee sii jira, ahaanshaha dhabta ah. Ilaah wuxuu inaga doonayaa inaan noqonno sidii Masiixa oo kale, diyaarna u nahay inaan ka tanaasulin mudnaanta si aan ugu adeegno dadka kale.
Qaar carruurta ka mid ah waa kuwa is-hoosaysiiya, kuwo kalena ma aha Ciise wuxuu u adeegsaday cunug khaas ah inuu hal dhibic caddeeyo: waa inaanu u dhaqannaa sidii carruurta qaar siyaalla ah - gaar ahaan xiriirka aan la leenahay Ilaah.
Ciise wuxuu kaloo yiri cunug ahaan waa inaad u diirisaan carruurta kale (V. 5), taas oo uu runtii ka fikiray labadaba carruurta caadiga ah iyo carruurta dareenka tusaalaha ah. Annaga oo ah dadka waaweyn, waa inaan ula dhaqannaa dhalinyarada si xushmad iyo qadarin leh. Sidoo kale, waa inaan si xushmad iyo xushmad leh uhelaan rumaystayaasha cusub ee wali aan bislaanin xiriirkooda Ilaah iyo fahamkooda barashada Masiixiga. Is-hoosaysiinteenu kaliya kuma xirna xiriirka aan la leenahay Ilaah, laakiin sidoo kale wuxuu u yahay tan dadka kale.
Ciise wuu ogaa inuu xidhiidh gaar ah la leeyahay Ilaah. Kaliya wuxuu si wanaagsan u yaqaan aabihiis si uu u awoodo inuu u muujiyo dadka kale (Matayos 11,27). Ciise wuxuu kula hadlay Ilaah isagoo adeegsanaya Aramaigga Abba, oo ah dareen naxariis leh oo carruurta iyo dadka waaweyn ay ula jeedaan aabayaashood. Waxay u dhigantaa qiyaas ahaan ereygayaga casriga ah "papa". Markuu tukanayay, Ciise wuxuu la hadlay aabihiis, wuxuu weydiistay caawimaad wuxuuna uga mahadceliyay hadiyadihiisa. Ciise wuxuu ina barayaa inaan loo baahnayn in lagu faaniyo si aan boqorka ula dhageysano. Isagu waa aabbeheen. Waan lahadli karnaa maxaa yeelay waa aabbahayo. Wuxuu noo siiyay mudnaantaan. Taasi waa sababta aan ugu kalsoonaan karno inuu na maqli doono.
In kasta oo aannaan carruurtii Ilaah ahayn si la mid ah inuu Ciise wiil yahay, Ciise wuxuu xertiisii ​​baray inay Ilaah u baryaan sida papa. Sannado badan ka dib, Bawlos wuxuu qaatay aragtida ah in kaniisadda Rome, oo in ka badan kun mayl u jirta aagagga ku hadla Afka Carabiga, ay Ilaah ku baryi karto ereyga Aramaah ee Abba (Rooma 8,15).
Looma baahna in la isticmaalo erayga abba salaadda maanta. Laakiin adeegsiga baahsan ee erayga ee kaniisaddii hore waxay muujineysaa inay si aad ah ugu farxay xertii. Waxaa la siiyay xiriir gaar ah oo ay la lahaadaan Ilaah, xiriir kaas oo dammaanad ka qaadaya helitaankooda xagga Ilaah xagga Ciise Masiix.
Ereyga abba wuxuu ahaa mid qaas ah. Yuhuudda kale tukashada sidaas oo kale ma aha. Laakiin xertiisii ​​Ciise way yeeleen. Waxay u yaqiinsadeen inuu Ilaah yahay cibaadadooda. Iyagu waxay ahaayeen carruurtii boqorka, ma aha oo keliya xubno ka mid ah quruun la soo doortay.
Dhalashada iyo korsashada
Adeegsiga tusaalayaal kala duwan ayaa rasuulladii u adeegay inay muujiyaan bulshada cusub ee rumaystayaashu la lahaayeen Ilaah. Ereyga badbaadadu wuxuu soo gudbiyay fikradda ah inaan noqonno hantida Ilaah. Waxaa nalooga soo iibsaday suuqa addoonsiga dembiga qiimo aad u weyn - dhimashadii Ciise Masiix. “Abaalmarinta” lama siin qof gaar ah, laakiin wuxuu gudbiyaa fikirka ah in badbaadadeennu qaali ahayd.
Ereyga dib-u-heshiisiintu wuxuu adkeeyay xaqiiqada ah inaanu ahaan jirnay cadawga Ilaah isla markaana saaxiibtinimadii hadda dib loo soo celiyay Ciise Masiix. Dhimashadiisu waxay u oggolaatay ka saarida dembiyada inaga soocaya Ilaah iyo diiwaangelinta dembiyadeenna. Ilaah sidan buu inoogu sameeyey maxaa yeelay annagu awood uma lihin inaan nafteenna wax u qaban karno.
Markaa Baybalku wuxuu ina siinayaa isbarbardhigyo dhowr ah. Laakiin xaqiiqda ah in isbarbardhigyada kaladuwan la adeegsado ayaa innaga horseedeysa gabagabo in midkoodna uusan na siin karin sawir dhammaystiran. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay laba is barbardhig oo midba midka kale iska horkeeni lahaa: tan koowaad waxay muujineysaa inaan ku dhashay dhalashada Ilaah xagga sare iyo tan kale ee nala soo korsaday.
Labadan tusaalooyin waxay ina tusayaan wax muhiim ah oo kusaabsan badbaadadeenna. Inaad mar labaad dhasho waxay ka dhigan tahay inuu jiro isbeddel xag-jir ah oo ku yimid bini-aadamnimadeenna, isbeddello billaabmaya mid yar oo ku koraya nolosha nolosheenna. Waxaan nahay abuuris cusub, dad cusub oo ku nool nolol cusub.
Korsashada waxay ka dhigan tahay inaan horey u ahaan jirteen shisheeye boqortooyada, laakiin hadda waxaa naloogu dhawaaqay carruurta Ilaah go'aanka Ilaah iyo caawimaadda Ruuxa Quduuska ah iyo inaan helno xuquuq buuxda oo dhaxalka iyo aqoonsiga. Annagu, waagii hore fogaa, waxaa nalagu soo dhoweeyey hawsha badbaadinta ee Ciise Masiix. Waxaynu ugu dhimanaynaa isaga, laakiin uma baahnin inaan isaga u dhinno isaga daraaddiis. Waxaan ku nool nahay isaga, laakiin maahan innaga oo ku nool, laakiin waxaynu nahay dad cusub oo loo abuuray Ruuxa Ilaah.
Micne kasta ayaa leh macnaheeda, laakiin sidoo kale qodobbadeeda daciifka ah. Ma jiro wax dunida ku dhex jira oo si buuxda u sheegi kara waxa Eebbe ku sameeyo nolosheena. Isbarbardhigyada uu ina siiyey, muuqaalka kitaabiga ah ee ilmaha Ilaah ayaa si gaar ah loogu oggolaaday.
Sida carruurtu u noqdaan
Eebbe waa abuuraha, bixiyaha iyo boqorka. Laakiin waxa nooga muhiimsan annaga waa aabe. Waa xiriir dhow oo lagu muujiyo xiriirka ugu muhiimsan ee dhaqanka qarnigii koowaad.
Dadka bulshada wakhtigaas waxaa lagu gartay aabahood. Tusaale ahaan, magacaagu wuxuu ahaan lahaa Yuusuf ina Ceelii. Aabahaagu wuxuu go'aamin lahaa booskaaga bulshada. Aabahaagu wuxuu go'aamin lahaa xaaladaada dhaqaale, xirfadaada, saygaaga / xaaskaaga mustaqbalka. Wixii aad dhaxashid aabbahaa bay ka timid.
Hooyooyinku door muhiim ah ayey ka ciyaaraan bulshada maanta. Dad badan ayaa maanta leh xiriir wanaagsan oo hooyadood la leh aabbahood. Haddii Kitaabka Quduuska ah maanta loo qoro, runti waa mid sidoo kale tixgelin gaar ah ku yeelan doonta tusaalayaasha hooyada. Laakiin xilliyadii baybalka, tusaalayaashii aabbayaashu aad ayey muhiim u ahaayeen.
Ilaaha, oo mararka qaarkood muujiya tayadiisa hooyadeed, ayaa had iyo goor isagu isu yeeraa aabbe. Haddii xiriirkeenna aabaheenna dunidu uu fiicnaado, isbarbardhiga ayaa si fiican u shaqeynaya. Si kastaba ha noqotee, haddii aan xiriir xun la leennahay aabbahayaga, waxaa nagu adkaaneysa inaan aragno waxa Ilaah isku dayay inuu noo caddeeyo xiriirka naga dhexeeya isaga.
Xaq uma lihin xukunka in Ilaah aanu ka fiicnayn aabaheenna dunida. Laakiin laga yaabee inaan nahay hal abuur kufilan oo aan ku qiyaasi karno cilaaqaad laxiriira waalidka oo aadanuhu uusan gaari karin. Ilaah waa ka wanaagsan yahay aabaha ugu wanaagsan.
Sidee ayaynu u nahay innagoo ah carruurtii Ilaah oo Ilaah u eeg xagga aabbeheen?
Jacaylka Ilaah inagu qabo waa mid qoto dheer. Wuxuu bixiyaa allabaryo si uu noogu guuleysto. Isaga wuxuu inoogu abuuray sidii aragtidiisa oo wuxuu jeclaan lahaa inuu arko annagoo dhammaystiray. Badanaa, waalid ahaan, waxaan kaliya ogaano inta aan ugu mahadcelin karno waalidkeenna waxkastoo ay noogu sameeyeen. Xiriirka aan la leenahay Ilaah kaliya waxaan dareemi karnaa in hoos u dhac ku yahay waxa uu marayo sida ugu wanaagsan.
Maaddaama aan si buuxda ugu tiirsannahay isaga, waxaan Ilaah ku fiirinaynaa kalsooni. Hantideena gaarka ah kuma filna. Waxaan ku aaminnay inuu daryeelo baahiyaheenna uuna na siinayo hagida nolosheena.
Waxaan ku raaxeysanaa ammaankiisa maalin kasta maxaa yeelay waxaan ognahay in Ilaaha Qaadirka ah uu ina xannaaneeyo. Isagu wuu ogyahay baahiyaheenna, ha ahaato kibis maalinle ah ama caawimaad degdeg ah. Ma aha inaan
walwal ha ka baqin maxaa yeelay aabe ayaa na daryeelaya.
Caruur ahaan ahaan, waxaa dammaanad inoo ah mustaqbal Boqortooyada Ilaah. Si loo adeegsado isbarbardhig kale: annagoo ah kuwa dhaxla, waxaan lahaan doonnaa hodan yaab badan waxaanan ku noolaan doonaa magaalo halkaas oo dahabku sida ciidda u badan yahay. Halkaas waxaan ku haysan doonnaa wax badan oo xagga ruuxa ah oo aad uga qiimo badan wixii aan maanta ognahay.
Waxaan leenahay kalsooni iyo geesinimo. Waxaan si waadax ah u wacdi karnaa annaga oo aan ka baqeynin silcin. Xitaa haddii nala dilo, ma cabsan doonno; maxaa yeelay waxaan leenahay aabbe cidna naga qaadi karin.
Waxaan u wajihi karnaa imtixaanadeena rajo wanaagsan. Waan ognahay in aabaheena uu u ogolaado dhibaatooyin si uu wax u barto si aan ugu fiicnaano mustaqbalka fog (Cibraaniyada 12,5: 11). Waxaan kalsooni ku qabnaa inay ku shaqeyn doonto nolosheena, in aan la diidi doonin.
Kuwani waa ducooyin aad u weyn. Laga yaabee inaad waxbadan ka fikiri karto. Laakiin waxaan hubaa inaysan jirin wax adduunka ka fiican oo aan ahayn ilmo Ilaah. Taas waa barakada ugu weyn ee Boqortooyada Ilaahay. Markaynu noqon sida carruurta yaryar, waxaynu noqonaynaa kuwa dhaxalka leh farxad iyo dhammaan barakooyinka Rabbiga
boqortooyada weligeed ah ee Ilaah oo aan la gariirin karin.